सांसद सुरक्षा मास्क - iSearch
सुरु आफैलाई कार्यशाला Respirator
2 श्वसन संरक्षण मास्कहरूको लागि सुरक्षा स्तर तीन कोटिमा विभाजित छन्
3 यो विशेष अनुप्रयोगहरूको लागि विशेष सुरक्षा?
4 विभिन्न श्वसन मास्कहरू के हुन्?
5 सांसद मुखौटा किन्ने बेला तपाईलाई के विचार गर्नुपर्छ?
6 श्वसन संरक्षण मुखौटा - मानिसहरूको सुरक्षाबाट कल्पना गर्ने छैन
7 श्वसन मुखौटाको ऐतिहासिक विकास
8 पूर्ण मुखौटाको सामान्य संरचना
9 आधा मास्क र राम्रो धूल मास्क के हो?
10 श्वसन मास्कको प्रकार्य
11 कुन मुखौटा प्रणालीहरू छन्?
12 अरूलाई श्वसन मुखौटाको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ
यदि तपाईं एसिड, ग्याँसहरू वा ठीक धूलमा सास गर्नुहुन्छ भने यो स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ। छाला समस्या यो हो कि उल्लिखित प्रदूषकहरू साँस वायुमण्डलमा लगभग अदृश्य छन्। उचित सुरक्षा सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस् Respirator विभिन्न फिल्टर प्रणाली, ताकि फेफड़ों र रक्त प्रवाह हुनबाट रोक्न को लागी। ठीक धूलको लागि एक मानक फिल्टरको साथ मानक कप आकार र साथमा मास्कहरू पनि छन्। विभिन्न श्वसन सुरक्षा मास्कहरू मध्ये तपाईंको लागि सही हो, सुरक्षा स्तरमा निर्भर गर्दछ।
श्वसन संरक्षण मास्कहरूको लागि सुरक्षा स्तर तीन कोटिमा विभाजित छन्
FFP1 को रूपमा वर्गीकरण गरिएको श्वसन सुरक्षा मास्क, यस्तो श्वसन संरक्षण मुखौटाको मात्र एक सानो डिग्री को प्रस्ताव सामान्यतया धुआं वा धूल बिग्रिएको काममा प्रयोग गरिन्छ जुन स्वास्थ्यलाई हानिकारक छैन।
धूल विरुद्ध संरक्षण
गैर-फाइब्रोजनिक धूल विरुद्ध संरक्षण
अधिकतम 25% कुल रिसाव
4 - कार्यस्थल सीमा मान पार भयो
FFP1 सँग चिन्हित डिस्पोजेबल मास्कहरू, एक कामको वातावरणको लागि उपयुक्त छन् जहाँ कुनै फाइब्रोजनिक डस्टहरू अपेक्षित हुने छैनन्। FFP1 श्रेणीको श्वेताटर मुखौटा हावामा कणहरूको 80% मा फिल्टर गर्नुहोस्। व्यावसायिक सुरक्षाको लागि, यो श्वसन मुखौटा केवल4पटक कार्य स्थान सीमा मान अधिकतम अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ठोस, तरल र हानिकारक कणहरू विरुद्ध एक मध्यम सुरक्षा FFP2 श्वसन सुरक्षा मास्क द्वारा प्रदान गरिएको छ। यी श्वसन मास्कहरू धेरै पावर उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ र पर्याप्त सुरक्षात्मक प्रभाव छ
ठोस धूल विरुद्ध संरक्षण
संरक्षण तरल हानिकारक धूल, एयरोसोल र धुआन
फाइब्रोजेनिक कणहरू विरुद्ध संरक्षण
कुल रिसार्जको अधिकतम 11%
अधिकतम 10-कार्यस्थल सीमा भन्दा बढी
ठीक धूलो मास्क चरण FFP2 चिनो लगाइएको जुन मा, mutagenic-परिवर्तन र हानिकारक पदार्थ काम जो एक काम वातावरण लागि आदर्श हो। यो respirator श्रेणी FFP2 हावा क्षेत्रमा छन् कणहरु कम्तिमा 94% गर्न सक्षम हुनुपर्छ। FFP2 सुरक्षा चरणको ठीक धूल मास्कहरू खनन र विशेष गरी धातु उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ। यी अवस्थामा कामदारहरू कोहरा, विषाक्त धुलो र एयरोसोलमा अवस्थित छन्। यी पदार्थहरू लामो समयसम्म श्वसन रोगहरूको विकासका लागि आधार हुन्छन् जुन फेफड़ोंको क्यान्सर हुन्छ। तर सक्रिय फेफड़ोंको तपेदिकको रूपमा रोग विकास गर्ने जोखिम पनि उच्च छ
श्वसन संरक्षण मास्क प्रत्य। जस्तै सावधानीपूर्वक सुरक्षा स्तर FFP3 को साधन संरक्षण फिल्टर ठोस, तरल को विशेष रूप देखि जहरीली कणों को बिरुद्ध को रक्षा गर्दै छन्। FFP3 चरणको श्वसन सुरक्षा मास्क को बिरुद्ध सुरक्षित राखिएको छ, विशेष गरी रेडियोधर्म पदार्थहरू, धमनीहरू, कार्सिनजनहरूको उनीहरूको एंजाइमहरू।
क्यान्सर प्रदूषकहरूको विरुद्ध संरक्षण
रेडियो निष्क्रिय प्रदूषकहरूको विरोध
भाइरस र जीवाणु विरुद्ध संरक्षण
फोङ्गस पोर्न्स विरुद्ध संरक्षण
अधिकतम 5% कुल रिसाव
अधिकतम 30 निर्दिष्ट कार्य स्थान सीमा मान भन्दा बढी छ
सायद सुरक्षात्मक मास्कहरू, जुन FFP3 सुरक्षा वर्गको भाग हो, प्रयोगकर्तालाई अधिकतम सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस्। किनभने कुल रिसाव निर्धारित अधिकतम 5%, कणहरु कम्तिमा 99% फिल्टर छन् respirator वर्ग FFP3, जताततै प्रयोग गर्न सकिन्छ मुख्यतः पेशागत जोखिम सीमा को रासायनिक उद्योग मा प्रयोग गर्न 30 पटक अधिकतम भन्दा बढी हुन सक्छ
कुन सुरक्षा स्तरमा श्वसन संरक्षण मास्क सम्बन्धित छ, यो सीधा तोड्नमा श्वास मास्कमा जान सकिन्छ। श्वसन मुखौटा पनि उचित रंग-कोडित गर्न सकिन्छ। सुरक्षा स्तर FFP1 को लागी रङ्ग पहेंलो खडा छ। बीच सुरक्षा स्तरमा, श्वेताटर मास्क FFP2 को लागी रङ नीलोसँग चिन्ह लगाइएको छ। श्वेत सुरक्षा मास्कको लागि उच्चतम सुरक्षा स्तर FFP3 रङ रातोमा चिन्ह लगाइएको छ।
यो विशेष अनुप्रयोगहरूको लागि विशेष सुरक्षा?
विलायक युक्त पदार्थहरूसँग काम गर्ने कोहीले विशेष श्वसन सुरक्षा मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। विशेष श्वसन सुरक्षा मास्क निम्न मापदण्डहरुमा विभाजित छ:
कार्बनिक ग्याँस र वाष्प (ए) को बिरुद्ध सांसद संरक्षण
कार्बनिक ग्याँस र वाष्प (बी) को बिरुद्ध सांसद संरक्षण
श्वसन संरक्षण एसिड (ई)
अमोनिया विरुद्धको साधन संरक्षण
गठबन्धन निवारण संरक्षण (ABEK)
विभिन्न श्वसन मास्कहरू के हुन्?
कप मुखौटा एक राम्रो धूल हो जुन विशेष रूपमा स्थिर हुनुपर्छ। विशेष स्थिरताको कारण, यो चाँडै सेट अप गर्न सकिन्छ र तपाईं यस तथ्यबाट राख्न सकिन्छ कि हामी एक हातबाट कप मुखौटा राख्न सक्छौं, दैनिक सञ्चालनको लागि धेरै उपयुक्त छ।
यदि तपाईं प्राय: सडकमा हुनुहुन्छ र केवल FFP1 श्रेणीको आधारमा सर्भर सुरक्षा चाहिन्छ, तपाइँ पनि तह मास्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। शिकन मेस्कहरू अन्तरिक्ष बचत गर्न सकिन्छ। पसीना अवशोषण प्याडिंगको तह मास्क।
विशेष मास्कहरू मास्क मास्क र पूर्ण मास्कहरू समावेश गर्दछ।
आधा मास्क र पूर्ण मुखौटा खतरनाक वाष्प र ग्याँसहरू विरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। कुन सुरक्षा स्तरमा आधा मास्क वा पूर्ण मास्कले निर्मित इन फिल्टरमा निर्भर गर्दछ। यी फिल्टरहरू या त स्थायी रूपमा एकीकृत छन् वा तपाईंको आवेदन अनुसार अनुसार बेचेको रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
यी श्वसन मास्कहरू सामान्यतया उच्च गुणस्तर फिल्टर प्रणालीसँग सुसज्जित छन् ताकि श्वसन प्रतिरोधलाई कम राख्न सकिन्छ।
सांसद मुखौटा किन्ने बेला तपाईलाई के विचार गर्नुपर्छ?
जो पनि आफ्नो श्वसन मुखौटा को आवश्यकता छैन या नहीं हरेक दिन डिस्पोजेबल मास्क को खरीद मा भरोसा गर्न सक्छन्। यदि, तथापि, श्वसन मुखौटा प्रायः वा दैनिक प्रयोग गरिन्छ, पुन: प्रयोज्य मुखौटाको खरीद धेरै छोटो समयमा लाभदायक छ।
एक श्वसन मुखौटा खरिद गर्दा एक वाल्वलाई विचार गरिनु पर्छ। वाल्वले सुनिश्चित गर्दछ कि प्रयोगकर्तासँग पर्याप्त अक्सीजनको आपूर्ति छ र एकै समयमा साँसिंग वायुको भागबाट बचाउन चश्मेहरूलाई लीकबाट रोक्छ।
निस्सन्देह, तपाईंले यो क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्छ जसमा श्वसन मास्क प्रयोग हुनु पर्छ। यो हदसम्म, खरिदले सुरक्षा कक्षाको मापदण्डसँग व्यवहार गर्नुपर्दछ।
श्वसन संरक्षण मुखौटा - मानिसहरूको सुरक्षाबाट कल्पना गर्ने छैन
मर्न Respirator तिनीहरूको प्रयोगमा आधारित अन्य नामहरू पनि छन्। भित्तामा, त्यो पनि भनिन्छ अक्सिजन मास्क वा जस्तो ग्याँस मास्क उल्लेख। यो पनि नागरिक आपातकालीन सेवा जस्तै एबीसी सुरक्षात्मक मास्क जस्तै आगो ब्लेड र THW को रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आज, त्यो पनि यो नाम सेना क्षेत्र मा बन्छ। पूर्व जीडीआर को NVA मा, श्वसन को आधिकारिक बनी सेना मास्क भनिन्छ। यो सबै प्रकारका विषाक्त पदार्थहरूको विरूद्ध एक प्रभावकारी सुरक्षा एजेन्सी हो जसले श्वसन वायुको माध्यमबाट शरीरबाट अवशोषित गर्न सक्छ। श्वेषकले पूरा मुखौटा र आधा वा चौथा मास्कहरूमा विभाजित हुन्छ। विशेष विशेषता कण-फिल्टरिङ आधा-मास्क हो। श्वसन मुखौटाको व्यक्तिगत प्रकारको गुण विभिन्न स्तरहरूमा निर्दिष्ट गरिएको छ। यसमा EN 136, EN 149 र EN 140 समावेश गर्दछ। त्यसपछि, तिनीहरू सिलिकॉन वा रबडबाट बनाइन्छन्। दुवै पहिला चमडा वा कपडा सामग्री बनाइएको मास्क भन्दा उच्च स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्दछ। श्वसन मास्क संग, एयर-निर्भर र गैर-पुनरावृत्ति-निर्भर मोडेल को बीच एक अंतर बनाइन्छ। साथै, एक भिन्नता पछि दबाव मास्क र सामान्य दबाव मास्क गरे। एकै ओर, श्वसन मास्क को सेना द्वारा आवश्यक छ, जहां सैनिकों विषाक्तों को बिरुद्ध सुरक्षित र रासायनिक या जैविक हथियार को सामाग्री पनि हुन सक्छ। आगो ब्रिगेड पनि श्वास मास्कहरू बिना होइन। यसको बिना गर्मी संरक्षण कपडाको साथ संयोजनमा, यो असुविधाजनक हुनेछ कि आगो आगोले मानिसहरूलाई घरघरबाट जोगाउन सक्छ। तर सामान्य व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि श्वसन मुखौटा एक उपयोगी सहायता हो। एक मात्र विभिन्न टैंक को सफाई को बारे मा सोच को आवश्यकता हो, जहां श्रमिकों हानिकारक वाष्पहरु को सामना गर्न को लागी हुनेछ।
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका श्वसन संरक्षण मास्कहरू छन्, जस्तै पूरा मुखौटा र आधा मुखौटा। तिनीहरू सैन्य द्वारा प्रयोग गरिन्छ, तर सहायक सेवाहरू साथै कार्यस्थलमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
श्वसन मुखौटाको ऐतिहासिक विकास
वास्तविक श्वसन मुखौटा को पहिलो पूर्ववर्ती पहिले देखि नै 19 को अन्त मा थियो। सदी खनन। त्यहाँ तथाकथित श्वेताकारहरू प्रयोग गरीयो, जसको सहायताले खनिजको खनिज प्रजातिहरू डस्टबाट सुरक्षित गरिन्थ्यो, जुन भूमिगत प्रविधिको अयस्क र कोइला खननबाट रोक्न सक्दैन। यी धेरै सरल मोडेलहरू थिए, जसमा कपडा फिल्टरहरूद्वारा धुन वायुसेनाबाट धूल हटाइएको थियो। उनीहरूको पहिलो सैन्य प्रयोग प्रथम विश्वयुद्धको समयमा श्वसन मुखौटा थियो। यहाँ सेनाहरूले पहिलो रासायनिक हतियारको साथ दुश्मनको आक्रमणहरूको प्रभावबाट सुरक्षित रहनु पर्छ। यो सील मा र पनि फिल्टर मा नयाँ गुणहरु को विकास को आवश्यकता हो। श्वसन मुखौटा सफा गर्न कार्बन फिल्टरहरू प्रयोग गर्ने पहिलो वैज्ञानिक जसले निकोलाई दिमित्रियेविच सेलिन्स्की नामक रूसी थियो। उनका आविष्कारहरू 1915 मा फर्किन्छ। पहिलो विश्वयुद्धमा, मास्कहरू प्रयोग गरिएका थिए जुन मुख्य रूपले अप्रेष्ट कपडा सामग्रीको बनाइएका थिए। धेरै मोडेलहरू अहिलेसम्म काल्पनिक चारकोल फिल्टर छैन, तर कपासको फिल्टरसँग सुसज्जित वा कुनै फिल्टर थिएन। युद्धको अग्रिमको साथ, श्वसन मुखौटाले अझ बढि विकास गर्यो। विभिन्न प्रकारका रसायनहरू अवशोषित गर्न फिल्टरहरू आविष्कार गरियो। र किनकि 1 मा घोडाहरू। अझै पनि महत्त्वपूर्ण "युद्ध उपकरण" थिए, तिनीहरूका निम्ति विशेष श्वसन सुरक्षा मास्क पनि विकसित गरे। द्वितीय विश्व युद्धमा "ग्याँस मास्क" विकसित गरियो। तिनीहरूलाई वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि संस्करणहरूमा दिइएको थियो र नागरिक जनसंख्यामा वितरित गरियो। यस समयमा, उक्रेनको ग्यास संरक्षण हुडहरू पनि तीव्र प्रभावकारी थिए।
श्वेत संरक्षण मास्कले खननमा प्रयोग गरिएको धूल संरक्षणको थप विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। ग्याँस मास्कहरू नयाँ प्रकारका फिल्टरहरूसँग अधिक र अधिक कुशल भएका छन्।
पूर्ण मुखौटाको सामान्य संरचना
पूरा मुखौटाको मुखौटा शरीर रबर वा सिलिकन। यसमा वा दुई वा दुईवटा विन्डोजहरू छन् जुन मास्किंग शरीरमा सील फ्रेम मार्फत जोडिएको छ। दुईवटा विन्डोहरूसँग पूर्ण मास्कहरू मुख्यतया सैन्य अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ किनभने तिनीहरू थप स्थान-बचत गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, एक पूर्ण मुखौटा एक वाल्व छ, जसको माध्यमबाट exhaled हावा बाहिर निस्किएको छ। तिनीहरूसँग आन्तरिक मुखौटा वा वायु नलिकाहरू छन्, जसको माध्यमबाट ताजा हावा प्रवेश गर्दछ। यो पहिले सास फेर्ने फिल्टर पास गर्नु पर्छ, जुन पूर्ण मुखौटा को एक मुख्य भाग हो। यसको अलावा, त्यहाँ एक आवाज झिल्ली साथै टेप र वैकल्पिक पट्टा छ। ब्यान्डिंग को एक विशेष रूप श्वसन मास्क एक सुरक्षात्मक हेलमेट मा जोडने मा सक्षम छ। तिनीहरू मुख्यतया आगो ब्लेड र सैन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। सेना को श्वसन मास्क को मामला मा, दोहराना अक्सर रबड टोपी द्वारा प्रतिस्थापित गरिन्छ, जो धेरै लचीला छ। धेरै मास्कहरू एक पट्टि पट्टा छन्। यसले तपाईंको गर्दनको वरिपरी झुन्ड्याउन सजिलो बनाउँछ। उड्डयनमा, एक कोष्ठकसँग मोडेलहरू मानक हुन्, जसको साथ तिनीहरूले दायरामा भत्काउन सक्छन्। भित्री मास्कको उपस्थिति सबै सञ्जालहरू माथि हेर्ने दृश्य खिडकियों को कोसिंग रोक्न को लागी माथि छ। विशेषज्ञ "कार्यात्मक मृत स्थान" को कम से कम को बारे मा कुरा गरदैछ। त्यहाँ कुनै भित्री मुखौटा छैन, तातो हावा को झगडा रोक्नको लागि वायु वेन्टहरू सँगसँगै नेतृत्व गरिन्छ। पूरा मुखौटामा साँसनी सुरक्षा हूड पनि समावेश छ, जसले हेलमेट र पूर्ण सुरक्षात्मक स्याट दुवैलाई संक्रमण गर्दछ। यी एक्स्ट्रास बिना, यो व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा क्षेत्रमा लागू हुन्छ वा अभिशाप उद्देश्यका लागि आपातकालीन समाधानको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आधा-सशस्त्र साथै कठोर मोडेलहरू व्यापक मुखौटामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
पूरा मुखौटा रबड वा सिलिकन को बनाइएको छ र एक भित्ति मास्क छ, वैकल्पिक रूपमा एक हावा डुप्लिकेट प्रणाली साथै एक वा दुई हेर्ने विन्डोजहरू। एक उपेक्षा श्वसन हुड हो।
आधा मास्क र राम्रो धूल मास्क के हो?
ठीक धूल मास्क कम्पाइन्ट सर्किटमा कण-फिल्टरिंग श्वेताटर मास्कको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो नाक र प्रयोगकर्ताको मुख आधा मास्कको रूपमा बन्द गर्दछ। यसले अनुप्रयोगका क्षेत्रहरू पनि सीमित गर्छ, किनभने तिनीहरू विषाक्त पदार्थहरू र अन्य अपर प्रदूषकहरू जस्तै पूर्ण मुखौटा जस्ता आँखाहरूको समानांतर संरक्षण छैन। सम्भव सील पनि प्रभावकारी छैन किनकि पूर्ण मुखौटा एक्लै नाकको आकृतिको कारण हुन सक्छ। तिनीहरू मुख्य रूपमा व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि खनन वा निर्माणमा। तिनीहरू वैकल्पिक रूपमा धूल सुरक्षा मास्कको रूपमा उल्लेख गरिएका छन् र अब पूर्णतया फिल्टरिङ सामग्रीबाट बनाइएका छन्। कण-फिल्टरिङ साँस मास्क मुख्य अगाडि तेल वा जलीय aerosols मा पहनने को श्वसन पर्चा सुरक्षित राख्दछ। फिल्टर इलेक्ट्रोट्याटिक सिद्धान्त अनुसार काम गर्दछ। यद्यपि पदार्थको संचयले वायु प्रतिरोधको वृद्धि बढाउँछ र यस प्रकार, समयको पासमा, सांसको समयमा बल को खर्च बढेको छ, त्यहाँ धेरै विशिष्ट नियमहरू छन् कि कति राम्रो मासुको मुखमा पर्न सक्दछ। आधा मास्कको वर्गीकरण EN 149 मानकमा फेला पार्न सकिन्छ। यसले आधा मास्क तीन वर्गमा विभाजन गर्दछ। वर्ग FFP-1 मा घुमाउन वाल्वमा रिसाव 25 प्रतिशत सम्म छ। यो आधा मुख मा केवल प्रयोग को लागि उपयुक्त छ जुन गैर-विषैले र फरिजनोजी पनि होइन। यहाँ, पनि, सिद्धान्त यो हो कि तिनीहरूको एकाग्रता चार कार्य भन्दा बढी भन्दा बढी कामको ठाउँमा अनुमति स्वीकार्य छ। सबैभन्दा राम्रो सुरक्षा FFP3 आधा मुखौटा द्वारा प्रदान गरिएको छ, जसको रिसावले पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्दैन। यो पनि रेडियोकर्मिक पदार्थ र क्यासिनोगेनहरूको विरुद्धमा सुरक्षा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यसले प्रयोगकर्ताको वायुवेवहरूमा माइक्रो-जीवहरूको प्रवेशको विरुद्ध पनि रक्षा गर्दछ। यो 30 गुणा एकाग्रतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन कार्यस्थलमा सुरक्षात्मक कपडा बिना अनुमति योग्य छ।
आधा मास्क केवल नाक र मुख मा सारिएको छ। यसले एक सही सील गाह्रो बनाउँछ। आधा मुख मा एन मानक अनुसार विभिन्न वर्गमा विभाजित गरिएको छ।
श्वसन मास्कको प्रकार्य
श्वसन मुखौटाको प्रकार्यको लागी, एक श्वसन फिल्टर प्रयोग गरिन्छ। आधा मास्कहरू केवल श्वास फिल्टरसँग मात्र लिन सकिन्छ। यी फिल्टरहरू, जुन सामान्यतया इलेक्ट्रोटोस्टेट सिद्धान्तसँग सञ्चालन गरिन्छ, डिस्टहरू फिल्टर गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन प्रत्यक्ष रूपमा फिल्टरमा संचित हुन्छ। यो ईनभलिंगमा नतिजाको परिणाम हो जुन ईनलिंग गर्दा कहिलेकाहीँ ठूलो प्रतिरोध हुन्छ। यस कारणको लागि, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा विनियममा निर्दिष्ट गरिएको अधिकतम पहिएको समयसँग अनुपालन गर्नुपर्छ। अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ जब पहननेवाला धेरै सुस्त हुन्छ। त्यसपछि, पर्याप्त हावा परिवर्तन भएको छैन र कार्बन डाइअक्साइड आधा मास्क भित्र निर्माण गर्न सक्छ। यसले असंगतिको खतरा उत्पन्न गर्दछ, जुन विशेषज्ञ सर्कलहरूमा अट्रापिंगको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो जोखिम पनि सर्कुलर यन्त्रहरु को मामला मा पाइन्छ जो पेंडुलम सांस लेने को सिद्धान्त को अनुसार संचालित गर्दछ। सांसस मास्कको साथ श्वसन मास्क को मामला मा, प्रयोगकर्ता मुखौटा भित्र एक वैक्यूम को संचय द्वारा प्रेरित गरिएको छ। श्वसन नियामकले हटाइएको हावालाई दबाव समीकरण गरेर प्रतिस्थापन गर्छ। प्रायः श्वसन मास्कहरूको लागि पुग्ने औसत दबाव 4,5 र 8 पट्टी बीचको हो। पुनरुत्थानित हवा या तो भित्री मास्क या देखने को खिडकियां (हरू) मा विशेष वायु नलिकाहरु को माध्यम बाट गुजरता छ र यसलाई कोहरे मा देखि रोकछन। यदि प्रयोगकर्ता सास हुन्छ भने, इन्सुलेशन वाल्व स्वचालित रूपमा बन्द हुन्छ र घुसाउनुहोस् वाल्व खोलियो। यस अवस्थामा, मास्क इन्टरनेटमा ओभरप्रेचर, जुन सामान्यतया एक्सएनएनएक्सएक्स पट्टीमा राखिएको छ, विषमण वाल्वमा वसन्त लोड को माध्यमद्वारा राखिएको छ। यसले मुखौटामा घुमाउने वाल्व र अन्य रिसावको माध्यमबाट विषाक्त पदार्थहरूको प्रवेश रोक्छ। इन्सुलेशन को समयमा महसूस गर्न को प्रतिरोध यस मुखौटा को लागि फिल्टर संग आधा मुखौटा को तुलना मा कम छ। तथापि, बहिष्कार गर्दा प्रतिरोध गर्न सकिन्छ।
सास फेर्नको लागी श्वसन मास्क को मामला मा, जब बढन को लागी एक बल बल व्यय को आवश्यक हुन्छ। फिल्टर मास्कको अवस्थामा, प्रतिरोध गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कुन मुखौटा प्रणालीहरू छन्?
श्वसन संरक्षण मुखौटाले सामान्य तवरले प्रणाली र ओभरप्रेस संग फरक पार्दछ। दुवैको फाइदा र हानि छ, जुन चयन गर्नु अघि एकअर्काको विरुद्धमा हल्का हुनुपर्दछ।
हालमा प्रयोग गरिएका मुखौटा प्रणालीहरूमा, ओभरप्रिन्ट मास्क र सामान्य प्रिन्ट मास्क भिन्न हुन्छ। सामान्य दबाव मुखौटा को यस तथ्य द्वारा मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ कि श्वसन नियामक को युग्मन एक कालो या नीलो मार्किंग छ। सामान्य दबाव मास्क भित्र, उही हावाको दबाइ बाहिरको रूपमा बाहिर जान्छ। श्वसन मुखौटा भित्रको दबाव सांसद र नियामक द्वारा ठीक छ। सामान्य दबाव मुखौटा को मामला मा, एक प्रदूषण हो कि प्रदूषकहरु साना देखि लीक मा घुस सकते हो। यो निस्सन्देहको समयमा उत्पन्न नकारात्मक दबाबले गर्दा, सांसद नियामक द्वारा मुआवजा हुनु पर्छ। अर्कोतर्फ, सामान्य दबाव मुखौटा ठूलो मात्रामा हावाको क्षति रोक्छ। ओभरप्रेश मास्क मा एक हावा को दबाव हो जुन परिवेश वायु दबाव को माथि लगभग चार मलब छ। यसले ईश्वरलाई धेरै सजिलो बनाउँछ, जुन विशेष गरी शारीरिक व्याख्यामा उल्लेखनीय छ। सकारात्मक पनि तथ्य हो कि साना प्रदूषकहरूले कुनै प्रदूषण घुसाउन सक्दैनन्। यो तथ्यको कारण हो कि आधारभूत भौतिक सिद्धान्तहरूले दबाव समानता सुनिश्चित गर्छ र यो भित्रको ओभरफ्रेश मास्क संग हुन्छ। तर एक समयमा एक हानि छ। यहां सम्म कि सानो लीकले ताजा हावा को बढि खपत सुनिश्चित गर्छ, जसलाई एक ओवरफ्रेसर मुखौटा को सम्भावना ओपरेटिंग टाइम मा असर गर्छ। यस कारणको लागि, विशेष सूचीहरू पेश गरिएको थियो, उदाहरणको लागि, अग्नि ब्रिगेड र सेनामा, जसले ताजा हवा आपूर्तिको वास्तविक-समयको निगरानी समावेश गर्दछ। वायु आपूर्तिको निगरानी र सामान्य दबाब मास्क को बिरुद्ध बढती सुरक्षा को बेहतर प्रौद्योगिकी संभावनाहरु लाई THW ​​र अग्नि ब्रेगेड को हाल को सालों मा श्वसन मुखौटा मा ओवरप्रेशे सिस्टम को उपयोग को लागि नेतृत्व गरेको छ। व्यक्तिगत श्वसन सुरक्षा मुखौटा को कनेक्शन को मिश्रण गर्न को लागी यो संभव छ कि उनि पुरा तरिकाले अलग अलग एडेप्टरहरु र धागे संग सुसज्जित हो।
अरूलाई श्वसन मुखौटाको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ
श्वसन मुखौटाको प्रकार्यले चश्मेको जोडा वा चिन र ग्याँसको पहनाबाट प्रभावित हुन सक्छ। दुवै रिसाव हुन सक्छ।
एक त्रासदी पहनेको रूपमा, मास्क सधैं चश्माको फ्रेम मार्फत लीक गर्ने जोखिममा छ। साथै विशेष चश्मा, जुन क्लासिक पट्टा रबड ब्यान्डको बट्टा, यो समस्या संतोषजनक रूपमा समाधान गर्न सक्दैन। चश्माहरू जुन क्लासिक फ्रेम छैन तर सिधा मास्क मा तार रोडको मद्दतबाट एक उपाय हुन्। इष्टतम समाधान व्यक्तिगत सांसद मास्क को लागी व्यक्तिगत छ, जसमा लेंस प्रयोगकर्ता को डायोट्रिक बल मा पीस गरेर स्पेक्ट्रा लेंस को बदलन गर्दछ। यसले एकल प्रयोगकर्तामा सम्बन्धित श्वसन मुखौटा फिक्स गर्दछ। एक विनिमय, उदाहरण को लागि, एक रेल को धेरै अग्निशमन को बीच यहाँ सम्भव छैन। लागत कारक पनि नकारात्मक प्रभाव छ। त्यो सैन्यले THW र अग्नि सेवामा दाई र अयोग्य छ भनेर अनुमति दिँदैन, श्वसन मुखौटाको कडाता संग केहि गर्न को लागी।
चिन्ता र चीकेबोनको सेवनमा, प्रदूषित हावा घुसाउन सकिन्छ। यसबाहेक, दाखिलाले गर्दा यी लीकहरूले श्वसन नियामकहरूको सही कार्यलाई असर गर्छ। दाँतको क्षेत्रमा यस्तो लीक पूर्णतया ढोका केही घण्टा पछि मापन गर्न सकिन्छ। तथ्य यह है कि श्वसन संरक्षण मास्क पनि प्रयोग को रूप मा प्रयोग एबीसी सुरक्षात्मक मुखौटा को कारण यो एयरवेज को परमाणु, जैविक र रासायनिक प्रदूषण को बिरुद्ध को रक्षा गर्दछ। तथापि, यो केवल आधुनिक मोडेल संग मामला हो। अस्ट्रियामा तपाईंले श्वसन मुखौटाका लागि कहिलेकाहीँ "Zuzz" शब्द सुन्नुभयो। यो तथ्य संग गर्न को लागी छ कि बच्चाहरु बच्चाहरु को लागि एक पैदलफार्म को सम्झना दिलािन्छ, र यो वास्तव मा अस्ट्रिया को वोल्क्समंड मा "Zuzz" भनिन्छ।
5er, 10er वा 20er सेटमा हेल्डेनवर्क श्वसनकर्ता - प्रीमियम सास फेर्ने मास्क - पूर्ण रूपले अनुकूलन योग्य FFP1 मास्क - ठीक धुलो मास्क, पीस आदिको लागि धुलो मास्क आदि।
सबैभन्दा प्रभावशाली संरक्षण - हेर्डेनवर्क फेस मास्कले एफएफपीएक्सएनएमएक्स सुरक्षा वर्गको अनुरूप काम गर्दछ र तपाईंलाई काम गर्ने ठाउँमा खतरनाक कणहरूबाट बचाउँछ: ठोस र जलीय कण दुबै फिल्टर र गम्भीर र स्थायी रोगहरू रोक्न प्रभावी रूपमा फिल्टर गरिन्छ!
100% PERFECT SEAT - लचकदार नाक पुलको साथ, हेल्डेनवर्क श्वसनकर्ता कुनै पनि अनुहारको आकारमा पूर्ण रूपले अनुकूलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले सास फेर्ने मास्क एकदम तंग छ र प्याडलाई अझै सहजै धन्यवाद छ - विशेष गरी तमाशा पहिरिनका लागि, श्वासप्रश्वासको सुरक्षा आदर्श छ!
गुणवत्ता आपूर्ति - नायकको कार्य गुणस्तरको लागि खडा हुन्छ। यसैले धुलोको मास्कले कडा गुणस्तर नियन्त्रणहरू पार गर्दछ र एक प्रीमियम डबल कोटिंग र उच्च-गुणवत्ताको सास फेरा वाल्भ फिचर गर्दछ। तपाईंको स्वास्थ्य पहिले आउँछ!
विविध अनुप्रयोग - हेल्डेनवर्क डस्ट मास्क नविकरण र नविकरण कार्यका लागि सोरिंग र डस्टि,, ड्रिलि gr, ग्राइन्डिंग र त्यस्तै किसिमका लागि उपयुक्त छ। DIY वा व्यावसायिक प्रयोगको लागि हो: आफ्नो स्वास्थ्यमा निर्माण गर्नुहोस्!
1 YEAR पैसा फिर्ता - हामी काम नायक हाम्रो गुणवत्ता को विश्वस्त हुन र एक बिल्कुल जोखिम-मुक्त अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ तिमी किन: तपाईं सन्तुष्ट छैनन् भने 100%, तपाईंले आफ्नो फिर्ता पैसा प्राप्त - खरीद पछि 1 वर्ष सम्म!
श्वासप्रश्वासको मुखौटा NASUM संरक्षण पेन्ट स्प्रे, धुलो, संरक्षण को लागी आधा मास्क स्प्रे, गद्दा, पेन्टि and र ग्राइन्डिंग कार्य सूचक को लागी गन्ध घटाउने सूचक
उच्च गुणस्तरको सामग्री: फूड ग्रेड सिलिकॉन सामग्रीले बनेको, लोचदार सिलिकॉन अनुहारको छालाले नरम तर दृढ मोहरको साथ आराम, टिकाउ र स्थिरता प्रदान गर्दछ।
NASUM बाट विशेष डिजाइन: कूल प्रवाह वाल्व सास र सुविधाको लागि गर्मी र नमी कम गर्दछ। आधा फेसस्पिस डिजाइनले विस्तृत क्षेत्र को दृश्य र वेल्डिंग र सेल्डिंग ढाल संग संगतता प्रदान गर्दछ।
अनुप्रयोगको क्षेत्र: पेन्ट स्प्रे, पोलिश, सीएस मास्क, ग्राइन्डिंग काम, स्वास्थ्य र महामारी रोकथाम र वातावरणीय प्रविधि बिरूद्ध संरक्षणको लागि लागू।
सन्तुष्टि ग्यारिटी: 100% हाम्रो ग्राहकहरूको लागि सन्तुष्टि ग्यारिटी। यदि तपाइँसँग एक महिना भित्र सुरक्षात्मक मास्क प्रयोग गरी कुनै समस्या छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्न संकोच नगर्नुहोस्। कृपया हामीलाई ई-मेल पठाउनुहोस्।
आपूर्तिको दायरा: यो व्यावसायिक श्वसन संरक्षण सेटले सफलतापूर्वक सबै कार्बनिक वाष्प, पराग, धूल र हावामा अन्य कणहरू ब्लक गर्दछ। 1xHalbmaske incl। 2x प्रतिस्थापन योग्य फिल्टर, 2x कपास बक्स, 2x कपास।
प्रस्तावBestseller no। 3
M मे पुन: प्रयोज्य आधा मास्क 3००२ सी - अर्ग मास्क कार्बनिक ग्यास, वाष्प र कणहरू बिरूद्ध प्रतिस्थापनयोग्य फिल्टरहरूका साथ - पेन्ट स्प्रे र मेसिन पीस कार्यको लागि।
3M पुन: प्रयोज्य सुरक्षात्मक मास्क कार्बनिक ग्याँस र वाष्पहरू (सुरक्षा स्तर A2) को साथ साथै कणहरू (सुरक्षा स्तर P2) को विरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
आधा मास्क मेशिन स्यान्डिंग वा पेन्ट स्प्रेइ work कार्यको लागि उपयुक्त छ - एक ब्रश वा पेन्ट रोलरको साथ पेन्टि when गर्दा र जब मिसिन स्यान्डि reliable गर्दा विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
असम्बन्धित फिल्टर परिवर्तन: फिल्टरहरू चाँडै र सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सकिन्छ तिनीहरूका बेयोनेट क्लिक जडानलाई धन्यवाद र मास्कको बडी सफा गर्न सकिन्छ
वितरणको स्कोप: १ x आधा मास्क 1००२ सी incl। २ सजिलो-परिवर्तन फिल्टर / विश्वव्यापी आकार / सुरक्षा स्तर: A6002P2 / ग्यास, वाष्प र कणहरू बिरुद्द भरपर्दो रेसिपरेटर मास्क
एफडीबीआरओ प्रशिक्षण मास्क - कसरत मास्क - उच्च उचाई सहनशीलता मास्क शक्ति वृद्धि, प्रतिरोध सास मास्क चलाउने केस (कालो, एम) प्रदर्शनको साथ चलाउँदै
【तपाईं किन आवश्यक छ? ब्रेकिंग सधैं कुञ्जी हो; चाहे तपाईं एक सक्रिय जीवनशैलीको वेश्या हुनुहुन्छ वा हाललाई उचित व्यायामको फाइदा पत्ता लगाउनु भएको छ, तपाई अब जान्दछन् कि खेलमा सास फेर्ने तपाईंको सफलताको अभिन्न भाग हो। आफ्नो व्यायाम दिनचर्या आज प्रशिक्षण मास्क समावेश गरेर अर्को स्तरमा फिटनेस, खेलहरू र खेलहरू ल्याउनुहोस्।
【बृहस्पतिवार को अवधीन स्तर: व्यायाम को समयमा मुखौटा को बिना आफ्नो सांस लेने को तीव्रता को बदलन। यो प्रशिक्षण मुखमा एक6स्तर वाल्व प्रणाली छ, हल्का देखि चरम, सहनशीलताको आधारमा। व्यायामको बेलामा राम्रो सास फेर्न सहनशीलता बढाउँछ, व्यायाम क्षमता र सुधारिएको सुधार।
【सुदृढ र योग्यता】: प्रशिक्षण मास्क उच्च गुणस्तर, अत्यन्त टिकाऊ निर्माण भएको छ। कडा लोचदार ब्यान्डको साथ बनाइयो। यो धुलो गर्न सजिलो छ। तपाईं बेल्टबाट मुखौटा हटाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं केवल मास्क सफा गर्न सक्नुहुन्छ वा अवकाश / पनीरको पछाडीबाट पट्टि।
【लाभहरू: तपाइँ आफ्नो कसरतको समयमा गहिरो सास लिन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई थकान नदिने र तपाईंलाई बढी उत्पादक बनाउन सक्दछ। बढेको वृद्धि हार्मोनले तपाइँलाई बढि चर्को जलाउन मद्दत गर्दछ, थप मांसपेशी बनाउँदछ र एक कसरत कसरत पछि छिटो पुनः प्राप्त गर्नुहोस्।
US प्रयोगको लागि सुरक्षा】 यस उत्पादनले धेरै प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्दछ, कुनै विष छैन, प्रयोगको लागि सुरक्षा। जब तपाईं पहिलो पटक इभा ब्यागबाट मास्क निकाल्नुहुन्छ, मास्कमा केही गन्ध आउन सक्छ, तपाईंले मात्र यसलाई पानीले धुनु पर्छ वा केही समयका लागि ईभा झोलाबाट बाहिर निकाल्नु पर्दछ, गन्ध आउँदैन।
M एम श्वासरेटर आधा मास्क रखरखाव नि: शुल्क, FFA3P1R D- फिल्टर, 2२4251१, EN सुरक्षा प्रमाणित
प्रभावकारी र आरामदायक सुरक्षा, उच्च पहने आराम, सजिलो हैंडलिंग
सेवाको वृद्धि बढ्यो
प्रयोगको लागि तयार
कम सांस प्रतिरोध
Kerbl 34510/10 स्वच्छता मास्क FFP1, 10 प्याक प्रदर्शन
१० टुक्रा / प्याक
मोटे धुलो, तरल ड्रप, ड्रप्ट संक्रमणको विरूद्ध
कुनै व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) छैन
एयरथलेटिक श्वसन मास्क प्रशिक्षण मास्क 12 भल्भ क्याप्स [6 कालो र6सेतो] र अतिरिक्त पकडको लागि टाउको पट्टि - जर्मन ब्रान्ड सूचक
7 व्हाइट र7काला प्रतिरोधी क्याप्स: सास फेर्ने मास्क छालामैत्री स्थिर सिलिकॉन र नायलन बाट बनेको हुन्छ। मास्क सजिलैसँग विच्छेदन गर्न सकिन्छ र सफा गर्न सजिलो हुन्छ।
हेल्ड बेल्टहरू र बीआर द्वारा फिक्सड स्टप: प्रशिक्षण मास्कले तपाईंलाई क्रसफिट, एमएमए, बक्सिंग, साइकल, दौड वा बल तालिममा राख्छ। एकाई आकार 65-100 किलोग्रामको वजनको लागि फिट हुन्छ।
प्रभावशाली प्रशिक्षण: सुधारिएको एथलेटिक प्रदर्शनको लागि श्वसन मांसपेशीहरूको सुदृढीकरण गर्दछ। तपाईंको फिटनेस, सहनशक्ति र कठिन अवस्थाको सर्तमा तालिम दिनुहोस्।
तपाईंको ट्रेनिंगलाई नयाँ तहमा लैजानुहोस्: ट्रेनिंग मास्कको विनिमय अटैचमेन्ट अनुकरण ऊंचाई प्रशिक्षण - 900 - 5500 मीटर बीच बिभिन्न उचाइमा सास फेर्ने हावाको आपूर्ति।
AIRTHLETIC चरम खेलाडीहरूको लागि विशेष खेल उपकरणको विकास र वितरणमा माहिर छ। तपाईं एक शुरुआत हुनुहुन्छ? त्यसो भए फिटनेस मास्क मेरो लागि होईन।
फ्लू सुरक्षात्मक मास्क, सुरक्षात्मक मास्क / श्वासप्रश्वासको मुखौटा, कान लूपहरूको साथ, भाइरस र फोहोरबाट जोगाउँछ, १० टुक्रा
सर्जिकल फेस मास्क जुन EN14683 मेडिकल मानकको अनुपालन गर्दछ
उनीहरूको कानमा लुगा लगाइन्छ सूंग फिटका लागि र बजारमा सब भन्दा सहजै हुन्छन्।
Percent 99 प्रतिशत भन्दा बढी फिल्टरहरू
यसले आफैले कार्य वा घरेलु कामका साथै ट्राफिक र वायु प्रदूषण (साइकल चालकहरूको लागि आदि) लाई पनि सुरक्षा दिन्छ।
3M Aura Atemschutzmaske 9322+ (10 pack), EN-Sicherheit zertifiziertAnzeige
Mannesmann Staubmasken, 5-tlg. Set, M40200Anzeige